Chii chinonzi Bretman Rock mambure akakosha? Kuongorora hupfumi hwePhilippines YouTuber apo iye achishanyira imba yake yeHawaii - Pop-Tsika
Chii chinonzi Bretman Rock mambure akakosha? Kuongorora hupfumi hwePhilippines YouTuber apo iye achishanyira imba yake yeHawaii
Filipino YouTuber Bretman Rock achangobva kuburitsa mukati memba yake yemamirioni-emadhora kumba kuHawaii.
Inoratidzwa muvhidhiyo yeYouTube neArchitectural Digest, Bretman Rock yakaratidza mifananidzo yakagadzirwa, rusvingo rwebhodhi, kona yake yesainzi, uye nezvimwe mukushanya kwekupedzisira kwemba kwakatumirwa muna Chivabvu 20.
Ahhhhhh AD yangu iri pano !! https://t.co/6R2d8nvWLf
- Gore raBretmanRock (@bretmanrock) Chivabvu 20, 2021
Rwendo kuburikidza neBretman Rock's Hawaiian imba
Achibhadhara mutero kunyika yake uye nhaka, Bretman Rock's Hawaiian villa inoratidzira akati wandei akagadzirwa zvidimbu uye fenicha dzakagadzirwa nevanyori muPhilippines.
Iko kutaridzika kweiyo imba kunoratidzira chitsuwa chinozunguzika, iine musango-rakafuridzirwa ruvara pendi uye anoyevedza maonero emakomo eHawaii.
Rwendo rwacho rwakaratidza kamuri yega yega yeimba, pamwe nezvinhu zvakakosheswa zvirimo. Imba yeYouTuber zvakare ine imba yekugadzira, yepamusoro kadenga, yekudya kwekuseni, uye nezvimwe zvakawanda.
murume wangu akasarudza mumwe mukadzi
Bretman Rock akatogovana zvake manzwiro akananga kuimba yake yekugadzira iyo yaitaridza 'Sephora-anotarisa' maketeni, sezvaaiti ndiko kwaakatanga.
Verenga zvakare: 5 yeAdison Rae yakanyanya hutachiona TikToks
Kuongorora Bretman Rock mambure akakosha uye hupfumi
Kuva mumwe wevanonyanya kuita runako munyika, mambure ake anofungidzirwa kuti anofungidzirwa kunge angangoita mamirioni maviri emadhora.
Bretman Rock akasimuka kuita mukurumbira kuburikidza neYouTube, anonzi anowana madhora 2-5 pa1000 maonero pamavhidhiyo ake. Mushure mekubudirira kuburitsa muunganidzwa wemakeji neColourPop muna2018, parizvino ari kubatana naMorphe kune yake phaleti yeanosimudza.
Bretman Rock x Morphe (Mufananidzo kuburikidza neMorphe)
zvinoreve kutanga pamusoro zvinoreva muhukama
Bretman Rock x ColourPop 2018 (Mufananidzo neGoogle)
Bretman Rock akaverengerwawo mu'TikTok Creator Fund, 'achimupa mari yakawanda mawonero akawanda aanowana. Kubva nhasi, akaunganidza vanopfuura mamirioni gumi vateveri uye mazana emamirioni ekuona zvachose.
Pamusoro pezvo, iyo YouTuber inowana mari yekuwedzera kuburikidza ne Instagram nezvakatsigirwa zvakatumirwa. Iine vanopfuura mamirioni gumi nevatanhatu vateveri, yega yega inotsigirwa positi inovimbiswa kumubhadhara zvakanak.
Verenga zvakare: 'Izvi zvakangopisa nekukurumidza chaizvo': Trisha Paytas, Tana Mongeau, uye vazhinji vanoita kuna Bryce Hall naAustin McBroom vachirwa pamusangano wenhau wetsiva
Bretman Rock on TikTok (Mufananidzo kuburikidza TikTok)
Bretman Rock yakasimudzira rukudzo rweveruzhinji pamusoro peimwe runako gurus mumakore mashoma apfuura. Vakarumbidzwa seye 'asina chinonetsa' runako guru, vateveri vake havagoni kumirira kuti vaone zvaanozotumira zvinotevera.
Verenga zvakare: Mike Majlak anotsoropodza Trisha Paytas pamusoro peTweet nezve ake / zvayakanakira runyorwa; inodaidzwa neTwitter
WWE RAW: Nyamavhuvhu 23 episode yekutarisa uye zviyero zvakaratidzwa zvine kudonha kubva kuSummerSlam
5 yakakurumbira ruoko mitezo / zviratidzo muWWE
'Takakuchengetedza kwemakore manomwe': Lee Seung Gi's fan club inotumira rori yekuratidzira, isingabvumire hukama hwake naLee Da In
6 WWE Superstar maTatoo ane backstory
Chii chakakosha mambure aRobby Steinhardt? Kuongorora hupfumi hweKansas hwemhirizhonga paanofa pa71
Nei Kevin Owens vs Dean Ambrose weiyo Intercontinental Championship kuRoyal Rumble iri rakanakira bhizinesi
Vanokunda zvikuru uye vanokundikana RAW husiku hwapfuura (June 3rd 2019)
Sei Kumira Kufungidzira Kwakanyanya
Uri Iwe Unofunga Kana Kunzwa Hunhu Hworudzi?
Yakawanda Sei Yakadzika Uye REM Kurara Kwaunoda Iwe Husiku Humwe Nega?
Zvikonzero zvishanu nei murume wako achigara akatsamwa kana kutsamwira newe
4 Superstars Triple H haisati yamborova one-on-one
Achiziva Reinterpretation Anokupa Mazano Pamusoro Upenyu, Ukama, Pfungwa, Muviri Uye Mweya.
murume wangu haachadi neni futi
zviratidzo zvemakemikari pakati pemurume nemukadzi
wwe humambo rumble 2019 zuva
zvinhu zvekuita munyika kana iwe uchinetseka
kurambana nemurume akaroora makotesheni
tinga shandure sei nyika